भारतबाट फर्केका नेपाली फेरि भारततिरै लागे, भन्छन्– ‘यहाँ के खाने ? मरे उतै मरौंला’ – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/भारतबाट फर्केका नेपाली फेरि भारततिरै लागे, भन्छन्– ‘यहाँ के खाने ? मरे उतै मरौंला’
धनगढी, १८ भदाै । दिनेश विक सुर्खेतमा बसेर एक कम्पनीमा काम गर्दै लोक सेवा आयोगको तयारी कक्षा लिइरहेका थिए । लकडाउनका कारण जागिरले निरन्तरता पाएन, आयोगको परीक्षा पनि रोकियो । त्यसपछि उनी रुकुमपश्चिम घर फर्के । ‘चैतदेखि घरको मानो खाएर बिनाकाम बस्नुपर्‍यो,’ २४ वर्षीय दिनेशले भने, ‘गाउँमा साथीहरू स्याउ टिप्न सिमला जाने भए । म पनि उनीहरूसँगै मिसिएँ ।’
उक्त समूहमा रहेका गोपाल घर्तीका अनुसार नेपाली कामदारका लागि सिमलाबाट स्याउ बगानका साहुहरूले गाडीको पास बनाएर सीमा नाकासम्म पठाउने गरेका छन् । ‘कोरोनाको डर मान्दै घरमा हातखुट्टा बाँधेर बस्न सकिएन,’ २७ वर्षीय घर्तीले भने । याे खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।